विश्वकपका किपर ज्यानमारा नेपालका टिपर ज्यानमारा - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
सामाजिक सञ्जालमा विश्वकप फुटबलसम्बन्धी प्राप्त प्रतिक्रिया :
अँ साँच्चै, ती होनहार आत्माहरू कहाँ गए ? जसले यसपालिको विश्वकप जर्मनी, अर्जेन्टिना, स्पेन वा ब्राजिलले जित्छ भनी टिएल जाम पार्थे ।
फिफा विश्वकप १९३८ मा जर्मनी ग्रुप चरणमै बाहिरिएको थियो र १९३९ मा विश्वयुद्ध सुरु भयो । ८० वर्षपछि फेरि त्यही इतिहास दोहोरिएको छ । अब तेस्रो विश्वयुद्ध हुनेवाला छ र जर्मनीलाई रसियाले साथ दिनेछ ।
विश्वकपका किपर ज्यानमारा नेपालका टिपर ज्यानमारा ।
विश्वकप फुटबल सक्या हो र ? कोही बोल्दैनन् त ? कसले जित्यो ? केही थाहा पाइएन त ?
फिफा विश्वकप ब्राजिलको पेवा हो र सधैंभरि जित्नलाई ? कहिले त अरू देशले नि जितको खुसीयाली मनाउन पाउनुपर्छ ।
डाक्टर देशका दलालविरुद्ध लड्दैछन् अनशन बसी, तर दु:खलाग्दो कुरा त हाम्रो देशमा यो छ कि डाक्टर केसी जसका लागि अनशनमा बसेका छन् ती युवाहरू भने आफूले सपोट गर्‍या टिमले विश्वकप जित्ला कि नजित्ला भन्ने चिन्तामा डुबेका छन् ।
ब्राजिल र उरुग्वे दुवै हारेपछि विश्वकप युरोकपमा परिवर्तन भएको छ ।
विश्वभरिका राष्ट्रहरू खेल्नेलाई विश्वकप भनिन्छ । युरोपका देशहरू मात्र खेल्नेलाई युरोकप । विश्वकप अब युरोकपमा रूपान्तरण भएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रको एक नियमअनुसार यो सालको विश्वकप फुटबलमा फ्रान्सको गणित बलियो देखिन्छ ।
विश्वकप युरोकपमा घटुवा भा’छ क्यारे, त्यसैले होला खास टेस परिरहेको छैन ।
रातभरिको अनिदोले ज्यान बिरामी । गर्नैपर्ने केही काममा अवरोध छ । त्यसैले अब विश्वकप नहेर्ने घोषणा ।
अब फाइनल चैं बेल्जियम र क्रोएसियाबीच भएको हेर्ने मन छ, मन भएर के गर्नु ? अधिकांश पण्डितहरू फ्रान्स र इङ्ल्यान्डको पक्षमा छन् ।